Four Seasons Mahotera uye Resorts inozivisa zvitatu zvitsva zvivakwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hospitality Industry » Four Seasons Mahotera uye Resorts inozivisa zvitatu zvitsva zvivakwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Japan Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Makumi mana Hotera uye Resorts nhasi yazivisa zvinhu zvitatu nyowani pamwe nekuvhurwa kweSan Francisco, Madrid neTokyo.
The itsva Four Seasons Hotel San Francisco paEmbarcadero inovhura zviri pamutemo muna Gumiguru 1st. Ichi chichava chivakwa chechipiri chivakwa muguta uye chiri padyo nenzvimbo yeEmbarcadero muDunhu reMari, matanho mashoma kubva kumabhizimusi makuru epasirese, maresitoreti ane nyeredzi yeMichelin, zvitoro zvepamusoro muUnited Square, nenzvimbo zhinji dzinofamba.
Iye zvino vhura kubva munaGunyana 25th seMwaka mina yekutanga kuSpain - Makumi mana Mwaka Hotel Madrid, iri mukati meguta guru rine pfungwa yekudyira nyowani nekupemberera, Spanish chef, Dani Garcia.
Four Seasons Hotel Tokyo kuOtemachi yakavhurwa munaGunyana 1st uye iri munharaunda yakare-kare yeTokyo, ingori nhanho kuenda kuImperial Palace. Iyo nyowani-nyowani, yakanyatsoita ano mahotera anoratidzira yechipiri Makumi mana Mwaka muguta.